iPhone (PRODUCT) RED, macOS 8 beta 10.12.4, AirPods case protector, iTunes 12.6, na ndị ọzọ. Kacha mma n'izu na m si Mac | Esi m mac
Pedro Rodas kwuru | | iPhone, Noticias, ọtụtụ
Onye ọ bụla kwuru na n'izu gara aga anaghị arụsi ọrụ ike na ụwa Apple bụ na ha egeghị ntị na ozi ọma Apple tinyere n'ahịa yana na kemgbe Fraịde gara aga ha nwere ike ịzụtarịrị na Apple Store na ntanetị na na Retail na-echekwa ngwaahịa ọhụrụ.
Otu n'ime isi ihe anyị ga - echetara gị taa bụ ngosi, maka oge mbụ kemgbe izipụtara iPhone mbụ, nke ụdị mbipụta pụrụ iche nke iPhone (Ngwaọrụ) Red. Ọ bụ mmegharị site na Apple nke na-abịa oge na-adịghị ma mana n'ezie na-eweta ọtụtụ ijeri maka ihe kpatara ya.
Anyị na-amalite a chịkọtara nke March site n'ichetara gị na Apple esesịn tọhapụrụ beta 8 nke MacOS 10.12.4 maka ndị mmepe, Apple nwere ntakịrị mmalite na betas ndị a, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ugbu a ọ dịkarịa ala, anyị ebiela na Mọnde maka ịhapụ ha maka betas maka macOS na Tuesday maka iOS. Usoro ndị fọdụrụ na-agbanwe ma ha abụọ nwere ike ịmalite nche na tvOS ma ọ bụ hapụ onye na-enweghị mmelite dịka ọ dị taa, nke dị ugbu a anyị nwere beta 7 nke watchOS mana ọ bụghị nke tvOS.
Ọ bụ oge tupu ha dị ma ọ bụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, oge ọ bụla Apple tinyere ngwaọrụ ọhụrụ na ahịa, gbadata ọrụ iji mepụta ihe nchebe ma ọ bụ ihe mkpuchi. N'okwu a, ihe nwere ike iyi ma dọkasị adọka bụ ihe chaja AirPods, Yabụ azịza anyị ga echetara gị ọzọ taa ga - abịara gị nke esereghị ese. Ọ bụ ikpe silicone nke na-emegharị n'ụzọ zuru oke na nkwụghachi ụgwọ AirPods n'ụzọ ọ ga-abụrịrị na ị gakwaghị elekọta nlekọta ahụ pụrụ iche iji hụ ebe ị tinyere ya. ma ọ bụ tinye aka gị n'isi ma ọ bụrụ na ị tụda ya.
N’ikpeazụ ụbọchị ruru mgbe Apple kpebiri itinye ya mbụ iPhone (Ngwaahịa) RED, ihe iPhone na-ahapụbeghị onye ọ bụla na-enweghị mmasị. Akụkọ sitere n'aka iPad ọhụrụ nke pụta ìhè mkpochapu aha "Ikuku" fọdụrụ na iPad, ọnụahịa ya na-ebelata site na ịme ka ụdị ntinye dịtụ ọnụ ala, mgbanwe na processor pro A9 na isi ihe ndị ọzọ anyị nwere ike ịhụ mgbe ọ wụchara. Banyere iPhone, anyị nwere agba ọhụrụ na agbaworị nnukwu agba palette, kepu kepu kepu uhie iPhone bụ ugbu a ukara. N'okwu a, ọ bụ ihe atụ (RED) nke na-enye akụkụ nke uru maka ọgụ megide AIDS.
Ozi niile nke Apple n’izu a apụtaghị na iPhone na iPad na bụ na Apple Watch Ọ na-enwetakwa ụdị agwa ọhụrụ nke na-eme ka ọ dị ọhụrụ. Themụ okorobịa si Cupertino agbakwunyela ọtụtụ eriri Nylon nke mere ka ha pụta afọ gara aga nwere agba mara mma na ọnụahịa nke 59 euro. O tinyewokwa eriri akpụkpọ anụ ọhụrụ nwere eriri dị iche iche na-acha uhie uhie, acha anụnụ anụnụ na oji nke ọnụahịa ruru 159 euro. Akara naanị nke dị ugbu a maka naanị Apple Watch Nike + bụkwa maka ọrịre.
Dịka ị pụrụ ịhụ, izu a na-arụsi ọrụ ike ma ọ bụ na Apple chọrọ ime ka akwụkwọ katalọgụ ya dị maka mmiri iji gbaa ahịa ume. N'ikpeazụ anyị na-echetara gị na e nwere iTunes ọhụrụ.
Themụ okorobịa Cupertino kwụgidere ya ma ọ bụghị naanị tinye ngwaahịa ọhụrụ na weebụsaịtị ha, kamakwa were ohere ịmalite ihe ohuru iTunes, ngwa anyị nwere ike iji zụta ngwa, egwu, akwụkwọ, ma na-enye anyị ohere ịgbazite ihe nkiri ma ọ bụ zụta ha ozugbo ka anyị nwee ike ịnụ ụtọ ha na ngwaọrụ ọ bụla. Ọ bụ ihe iTunes 12.6 nke ahụ si n'aka akụkọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » iPhone » iPhone (PRODUCT) RED, macOS 8 beta 10.12.4, AirPods case protector, iTunes 12.6, na ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Badia Images na PDF, n'efu maka obere oge